We.com.mm - ထမင်းမြိန်စေမယ့် ဇီးဖြူသီး ငပိထောင်းလေးလုပ်စားမယ်
ထမင်းမြိန်စေမယ့် ဇီးဖြူသီး ငပိထောင်းလေးလုပ်စားမယ်
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ထမင်းမြိန်မယ့် ငပိထောင်းလုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပေးပါ့မယ်။ ငပိထောင်းလေးကို ငပိချည်းပဲမထောင်းပဲ ဇီးဖြူသီးလေး ထည့်ထောင်းနည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ ဒီတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းလေးနဲ့ လုပ်နည်းလေးကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
၁. ဇီးဖြူသီး ( ၁၅ လုံး )
၂. ကြက်သွန်ဖြူ ( ၅ တက် )
၃. ငရုပ်သီးစိမ်း ( ၁၅ တောင့် )
၄. မျှင်ငါးပိ ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း )
၅. ပုဇွန်ခြောက် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၆. ပဲဆီ ( အနည်းငယ် )
၁. အရင်ဦးဆုံး ဇီးဖြူသီးကို နှစ်ခြမ်းလေးတွေ ခွဲပြီးဆားနဲ့နယ်ပြီး ဆေးထားပါ။ ဆေးပြီးရင် ဇကာလေးထဲမှာထည့်ပြီး ရေစစ်ပါ။
၂. ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ မျှင်ငါးပိတို့ကို မီးဖုတ်လိုက်ပါ။ မီးဖုတ်ပြီးရင်ထောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုဇွန်ခြောက်ကိုပါ ထည့်ပြီးထောင်းလိုက်ပါ။ ထောင်းပြီးပြီဆိုရင် ဆီးဖြူသီးလေးတွေကိုပါ ထည့်ပြီးထောင်းလိုက်ပါ။ အားလုံးပြီးသွားရင် ဆီ နည်းနည်းလေးထည့်ပြီး နယ်လိုက်ပါ။
၃. ဒါဆိုရင်အရသာရှိတဲ့ ဇီးဖြူသီးငပိထောင်း စပ်စပ်လေးကို ရရှိပါပြီနော်။
အကိတ်ဖြစ်စေမည့် protein bar (၄) မျိုး
Food Porn တို့အတွက် စမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲက အစားအသောက်ဆိုင်တွေတန်းစီနေတဲ့ မဟာဘောဂလမ်းလေး
Korea Spicy ခေါက်ဆွဲသုပ်စပ်စပ်လေး လုပ်စားမယ်
ဆေးဘဲဥက စားသင့်တဲ့ အစာတစ်ခုလား ?